भन्छन सत्य सावित्री देवी हरु रिसाय भनि राक्षसी रुप लिन्छन … तेस्तै भयो यो भिडियोमा पनि ??? सक्दो शेयर गरौ !!!!! रबी लामिछानेको बिरुद्ध बोल्नेलाइ अहिले सम्मकै कडा जबाफ भिडियो यसरी बोल्छ !! - Enepalese.com
भन्छन सत्य सावित्री देवी हरु रिसाय भनि राक्षसी रुप लिन्छन … तेस्तै भयो यो भिडियोमा पनि ??? सक्दो शेयर गरौ !!!!! रबी लामिछानेको बिरुद्ध बोल्नेलाइ अहिले सम्मकै कडा जबाफ भिडियो यसरी बोल्छ !!
इनेप्लिज २०७४ मंसिर १९ गते २३:३४ मा प्रकाशित